Rose of Sharon: မသက်ဝေတဂ်တဲ့ အိတ်မှောက်ဖာသွန် နှစ်ဆယ့်ခွန်
မသက်ဝေတဂ်တဲ့ အိတ်မှောက်ဖာသွန် နှစ်ဆယ့်ခွန်
အစ်မသက်ဝေဘလော့ပို့စ်လေးတင်တော့ကိုယ်ကတတိယမြောက်လားစတုထ္တမြောက်လားမသိဖတ်ကြည့်ပြီးသဘောတကျနဲ့ကော်မန့်ရေးဖြစ်တယ်… ခဏနေတော့ facebookမှာအမသက်ဝေကရေးဘို့တဂ်တဲ့အခါဝမ်းသာအားရရေးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်မိပေမဲ့ ခလေးတွေကျောင်းသွားကြိုရဦးမှာမို့ ညကျမှရေးဖို့စဉ်းစားထားခဲ့တယ်…
တကယ်တမ်းရေးတော့မယ်ဆိုတော့ အိပ်ရာပေါ်မှာအိပ်ကိုမှောက်ချလိုက်တဲ့အခါ ကိုယ့်ဟာကိုယ်တောင်ဘယ်လိုပြန်ရှင်းရမှန်းမသိတော့လို့ခဏလောက်ထိုင်နေမိတယ်…
ဇွန်လကုန်ထဲကခရီးတွေဆက်တိုက်ထွက်ရင်း မရှင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့အိတ်ထဲကထွက်ကျလာသမျှရဲ့၅၀ရာခိုင်နှုန်းက ငွေရှင်းပြေစာနဲ့လိပ်စာကဒ်တွေ။
ဗီယက်နမ်၊ရန်ကုန်၊ပြင်သစ်နဲ့အီတလီကစားသောက်ဆိုင်၊ဈေးဝယ်စင်တာတွေကငွေရှင်းပြေစာတွေကျွတ်ကျွတ်အိတ်အလတ်နဲ့တအိတ်စာလောက်ရှိတယ်… ကိုယ့်အိတ်အလတ်စားလေးထဲမဆန့်မပြဲထိုးသိပ်ထည့်ထားလိုက်တာတွေ အိတ်ခလေးကိုအားနာမိပါရဲ့…
လွန်ခဲ့တဲ့ခြောက်လလောက်ကမှကိုယ့်လက်ထဲရောက်လာတဲ့တောင့်တောင့်တင်းတင်းအိတ်လေးက သခင်နှိပ်စက်မှုအောက်မှာ အကူအညီမပါဘဲ မတ်တပ်တောင်မရပ်နိုင်တော့ဘူးရယ်….
၂။နေကာမျက်မှန်တလက်( ထည့်ထားပြီးထုတ်မတပ်ဖြစ်တဲ့နေကာမျက်မှန်လေး ကိုင်းတွေတောင်ကျိုးနေမလားမသိ)
၃။Clinique face powder (သူ့ကိုတော့ ခလေးတွေကိုမနက်ကျောင်းသွားပို့လို့ကျောင်းနောက်ကျတဲ့နေ့တွေမှာ မျက်နှာဗြောင်ကိုဖုံးဘို့သုံးတယ်)
၄။Estee Lauder နှုတ်ခမ်းနီအညိုဖျော့(တစ်ခါတစ်လေမှထုတ်ဆိုးဖြစ်တာ)
၅။ပိုက်ဆံအိတ်အမည်းရောင်(သူနဲ့တင်တော်တော်လေးတာ၊ ခရက်ဒစ်ကဒ်တစ်ကဒ်နဲ့ကျန်တာကdiscount card/member cardမျိုးစုံရယ်… မိသားစုဝင်လေးယောက်လုံးရဲ့ပတ်စပို့ဓာတ်ပုံတွေရယ်ဖုန်းကဒ်နဲ့အရေးကြီးတဲ့ဘောင်ချာတွေရယ်… ဗီယက်နမ်မှာငွေကြေးကဖောင်းပွတော့အပြင်ထွက်ရင်ပိုက်ဆံကိုသန်းချီသယ်ရသေးတာ :D )
၆။Eumovate cream(အထိခိုက်လွယ်အသားအရေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ကိုယ်ရယ်သားလေးရယ်အတွက် အရေးပေါ်သုံးနိုင်ဖို့ အမြဲဆောင်ထားရတယ်)
၇။Cetrizine ဆေးကဒ်(အစားမှား၊ဖုန်ရှုရင် အလာဂျီဖြစ်တတ်တဲ့ ကိုယ်နဲ့သားလေးအတွက် မရှိမဖြစ်)
၈။တစ်ရှုးထုတ်( wetရောdryရောအမြဲဆောင်ထားရတယ်… ခလေးတွေအတွက်wetကအမြဲလိုလို့)
၉။Strepsils (ဖုန်ထူတဲ့နေရာရောက်တိုင်း လည်ပင်းထဲယားကျိကျိဖြစ်ပြီးချောင်းဆိုးတတ်တဲ့ကိုယ်နဲ့သားအတွက်အဖော်မွန်)
၁၀။မှတ်စုစာအုတ်အသေးလေးနဲ့ဘောပင်(ဖုန်းနံပါတ်မှတ်ဖို့၊မှတ်ထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကြည့်ဖို့နဲ့…အဲဒီစာအုပ်လေးထဲမှာအရေးကြီးတဲ့နေ့တွေအပြင် ခလေးတွေရဲ့အရပ်နဲ့ကိုယ်အလေးချိန် သုံးလတစ်ခါတိုင်းထားတာပါရှိသေးတာ)
၁၁။ရှုဆေးဗူး(ခဏခဏခေါင်းမူးတတ်လို့ ဆောင်ထားတာ၊ တခါတလေကားမောင်းတဲ့သူနံနေရင်လဲ နှာခေါင်းပိတ်ဘို့အထောက်အကူရတယ်)
တကယ် တော့ဒီစာရင်း၁၂ခုကအိတ်ရှင်းပြီးမှအိတ်ထဲပြန်ထည့်မဲ့ပစ္စည်းတွေပါ...ပုံလေးထဲမှာသပ်သပ်ရပ်ရပ်ရှိသွားတာ မသက်ဝေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်... မသက်ဝေသာမတဂ်ခဲ့ရင် ခုထိအိတ်ရှင်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး... ကိုယ့်အတွက်တော့ဒီပို့စ်လေးကို ခေါင်းစဉ်နောက်တစ်ခုသာထပ်ပေးရမယ်ဆိုရင် ပေးလိုက်ချင်ပါတယ်...
Posted by rose of sharon at 10:38 PM
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! August 28, 2013 at 12:37 AM
သိပ်မများဘူးပဲ မမနဲ့ အိန်ဂျယ်နဲ့ အတူတူလောက်ပဲ ..မရောက်ဖြစ်တာတောင် ကြာသွားပြီ မမ :)
မြသွေးနီ August 28, 2013 at 9:33 AM
မနော် ပစ္စည်းတွေက သိပ်မများသေးဘူး..။အိတ်က ကြည့်ရတာ ကြီးသားပဲ.. ထပ်ထည့်လို့ရသေးတယ်...ခိခိ..
အစ်မသက်ဝေ tag post က အနည်းဆုံး ဘလော့ဂါဘက် ပြန်လှည့်ဖြစ်ကြတယ်...
Not too much things there....
ချစ်ကြည်အေး August 28, 2013 at 10:22 AM
ညီမ ရိုစ့်အိတ်လေးက မိခင်ဆန်လိုက်တာ.....။ လိုအပ်တာလေးတွေများတယ်နော် သဘောကျတယ်း)
သက်ဝေ August 28, 2013 at 11:07 AM
အမေတယောက်ရဲ့ မေတ္တာတွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့ အိတ်ကလေး တစ်လုံးပေါ့... ချစ်စရာ...
Tag Post လေး အချိန်ပေးပြီး ရေးပေးတဲ့ ညီမကို အမကလည်း ကျေးဇူးတင်တယ်နော်...
မိုးငွေ့........ August 28, 2013 at 11:37 AM
မသက်ဝေရဲ့ တဂ်ပို့စ်လေးကို တက်ညီလက်ညီလေးရေးကြတာတွေ့လို့ သဘောကျမိတယ် အမအိတ်လေးက မိခင်ဆန်တယ် ဟုတ်တယ်
ရိုးမြေကျ August 28, 2013 at 1:08 PM
ဒီနေ့တော့ အိတ်မှောက်ဖာသွန်လေးတွေ လိုက်အားပေးနေတယ်မမရေ။
ညီလင်းသစ် August 28, 2013 at 2:34 PM
“ကိုယ့်ဟာကိုယ်တောင် ဘယ်လိုပြန်ရှင်းရမှန်း မသိတော့လို့ ...” ဆိုတဲ့ စာကြောင်းဖတ်ပြီး ထိုင်ရယ်နေမိတယ်...၊းD ကိုယ်လွယ်နေကျအိတ်၊ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲ ထည့်ထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို တစ်ခါမှ မတွေ့ဖူးသလို ပုံစံနဲ့ ပြန်တွေ့ရတာ တအံ့တသြနဲ့ ပျော်ဖို့ကောင်းမယ် ထင်တယ်နော်..၊ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရော.. သားလေးအတွက်ပါ အသုံးဝင်မယ့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့မို့ မရိုစ့်ရဲ့ အိတ်ကလေးက ရင့်ကျက်ပြီး ချစ်စရာ ကောင်းတယ်...။
မောင်မျိုး August 28, 2013 at 3:09 PM
ဒီပို့စ်လေးဖတ်ပြီး အလုပ်သိပ်များတဲ့ အိမ်ရှင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို ဖျက်ခနဲမြင်လိုက်ရတယ် ။
ရွှေအိမ်စည် August 28, 2013 at 3:10 PM
ဒီ အိတ်ကလေးလည်း သဘောတကျလာကြည့်သွားတယ်
သိပ်မများသေးပါဘူး မမ :))
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အိတ်ရှင်းဖြစ်သွားတာ ကောင်းတယ်..။
လရိပ်အိမ် August 29, 2013 at 10:45 PM
အိတ်ကပေါ့မယ် လို့ ထင်တာဘဲ အမ။
ခရီးသွားတုန်းက ငွေရှင်းပြေစာတွေ အိတ်နဲ့ထည့်ထားတာ တဝက်လောက်ရှိတယ် ဆိုတာပါ ကြည့်ချင်တယ်။
San Htun August 29, 2013 at 11:11 PM
ဒီမှာလည်း တော်တော်များများ အလာဂျီရှိကြတယ်...လိုအပ်တာတွေ အကုန်ပါတယ့် အိတ်ကလေး...
blackroze August 30, 2013 at 12:29 AM
မကြီးအိတ်ကလေးကို ပစ်ပစ်လည်း လာကြည့်သွားတယ်နော်
mstint October 5, 2013 at 11:17 AM
တဂ်ပို့စ်လေး ဖြစ်တဲ့ အိတ်မှောက်ဖာသွန် နှစ်ဆယ့်ခွန် 'အိတ်ရှင်းဖြစ်သောနေ့တစ်နေ့' အကြောင်း ၀င်ဖတ်သွားတယ် မနော်ရေ...တီတင့်တော့ အခုထိ အိတ်ရှင်းခွင့် မရသေးဘူးကွယ်.... ဒီတစ်ရက်နေပြီးရင် အွန်လိုင်းတက်ရခက်တဲ့ ဌာနေကို ပြန်ရအုံးမယ် :P